Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha
Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Details Dadweynaha
gaabinta : RANEPA
aasaasay : 1977
Ardayda (qiyaastii.) : 25000
Ha iloobin in aad wada hadlaan Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha
Qor at Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha
RANEPA waa jaamacad keentay in Russia ee meelaha siyaasadda guud, maamulka dadweynaha, iyo maamulka ganacsiga.
Maanta RANEPA dhigan a-tier multi waxbarasho, cilmi-baarista iyo nidaamka tababarka in ay ka tarjumaysaa falsafad waxbarasho oo nolosha oo dhan. RANEPA bixiyaa barnaamijyo waxbarasho iyo tababar si ay ugu adeegaan baahiyaha waxbarashada ee shaqaalaha rayidka ah, ganacsi, maareeyayaasha, maal iyo qareennada.
ballanqaadyada RANEPA waa in:
waxbarashada nolosha oo dhan
hab shaqsiyeed waxbarasho
isku duubay teknoolajiyada cusub waxbarasho
waxbarashada aqoonta ku salaysan
horumarinta xarumaha heer aqoon sare
campus RANEPA Moscow waxaa ka mid ah 12 machadyada, dugsiyada iyo waaxaha.
Education for qaybta dadweynaha
Muddo sanado ah RANEPA ayaa sameeyay barnaamijyo badan oo u gaar ah si ay u tababaraan shaqaalaha rayidka ee Dawladda Federaalka iyo kuwa goboleed ee Russia. Generations ee shaqaalaha rayidka Ruush heleen tababar RANEPA helo shahaadooyinka jaamacadeed hore iyo dambe dhigata barnaamijyada qalin iyo muddo-gaaban. RANEPA ahaa mid ka mid ah hay'adaha ugu horreysey ee keentay МРА ah (Master of Public Administration) barnaamijka ee Russia si ay u daboolaan baahida qaybta dadweynaha iyo horumarinta ka tayo iyo awood shaqaalaha.
80% of taliyayaashii gobolka ee hadda jira qalin RANEPA | 60% ka tirsan xukuumadda federaalka waa qalin RANEPA
Tiro badan oo ka tirsan gobolka Russia ayaa ama lagu soo tababaray ee RANEPA.
Dawaarka-dhigay barnaamijka fulinta Tatarstan
RANEPA ayaa sameeyay Master gaar ah Fulinta ee Barnaamijka Maamulka Public dowladda ee gobolka Tatarstan. taxane ah barnaamijyada tababarka caadadii interactive u dhiibay in 2010 - 2011 caawiyay si loo xoojiyo xirfad-saldhig oo ay bixiyaan aragtiyo cusub oo ku saabsan siyaasadda kooxda ee madaxda dawladda ee asaasiga ah ee Jamhuuriyadda.
Waxbarashada ganacsiga gaarka ah
RANEPA taliso goobta waxbarashada xirfadeed for maareeyayaasha heerka sare ee shirkadaha Ruush. RANEPA ahaa horyaal ah suuqa barnaamijka MBA qoyska oo ahaa ugu horeeyay ee Russia si ay u helaan aqoonsi caalami ah barnaamij ay MBA. RANEPA sidoo kale soo bandhigay barnaamijkii ugu horreeyay ee DBA ee Russia iyo waa safka hore ee fulinta barnaamijyada Executive MBA dalka.
Barnaamijyada RANEPA MBA iyo ЕМВА waxaa laga aqoonsan yahay oo ay noqoto in sida ugu fiican oo tayo sare leh suuqa Ruush waxbarashada ganacsiga. barnaamijyada waxbarashada ganacsiga RANEPA waxaa aqoonsan by hay'adaha aqoonsiga caalamiga ah iyo kuwa qaranka, sida AACSB International, EFMD iyo Association of MBAga.
In ka badan 40% qalin MBA Ruush darajo ka helay RANEPA
RANEPA kasbatay sumcad weyn ku waxbarashada ganacsi oo ku salaysan falanqaynta cilmi goynta-ku laayeen oo ay dhacdo dhaqanka warshadaha. The tayada iyo dadaalka macallimiinta waxbaridda u hubinayaa heerka dhamaystirka sare iyo ku tacaluqa warshadaha keentay in heerarka sare ee qanacsanaanta ardayga iyo shaqo.
barnaamijyada tacliinta RANEPA daraan qaybaha heerka caalami ee la taaban karo in la hubiyo tayada iyo ka dhigi MBA ee tartan rasmi ah suuqa caalamiga ah ee waxbarashada.
RANEPA outreach caalamiga ah waxaa meelo boos keentay in Russia. RANEPA ka qayb tiro ka mid ah wada-shaqeeynta istiraatijiyadeed in la siiyo ardayda iyo macalimiinta xagga fursadaha dhaqdhaqaaqa caalamiga ah, helitaanka waxbarasho caalami ah, tababar caalami ah oo cilmi. Muddo qaabka guud ee iskaashiga caalamiga ah, RANEPA waxaa hirgelinta dhowr ah oo degree iyo non-degree barnaamijyada iyo mashaariicda wadajir ah dhammaan heerarka kala duwan ee jaamacadda iyo waxbarashada post-graduate.
Machadka Daraasaadka GANACSI
Machadka Maamul DADWEYNAHA IYO MAAMULKA
ISKUULKA EE SIYAASADDA GUUD
Machadka DADWEYNAHA IYO MAAMULKA QEYBTA GAARKA
DUGSIGA SARE EE MAAMULKA DADWEYNAHA
Machadka SHARCIGA IYO AMNIGA QARANKA
WAAXDA "DUGSIGA qalin MAARAYNTA shirkadaha"
WAAXDA "DUGSIGA SARE EE MAALIYADDA IYO MAAMULKA"
WAAXDA "Machadka MAARAYNTA IYO suuq"
Kuliyada DHAQAALAHA IYO BULSHADA SAYNISKA
DEPARTMENT OF MAALIYADDA IYO BANGIGA
Madaxweynaha Academy uu Ruush Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha (RANEPA) waxaa la aasaasay by si madaxweynaha on September 20, 2010. aasaaska Tani lug ku biirto laba tacliinta hore ee hadda jira: The Academy of Dhaqaalaha Qaranka (Ane), taas oo la aasaasay 1977, iyo Academy Ruush ee Maamulka Guud (RAPA), asaasay 1991. biirto ayaa sidoo kale isu keenay 12 hay'adaha waxbarashada gobolka kale.
Mid kasta oo ka mid ah Dugsiyada tacliinta sare biireen mar hore kasbadeen sharafta sida madaxda tababar kooxaha siyaasadeed ee Russia. Laga soo bilaabo marka ay abuurka 1977, Ane laftiisa ku faanaan sida salaysan taranta wasiirrada mustaqbalka. Iyadoo dayrta ee Midowga Soofiyeeti, Ane bedelay model istiraatiiji ah xubnaha tababar ah 'Nomenclatura' u tahay siinta waxbarashada ganacsi oo tayo sare leh, waayo, jiil cusub oo madaxda by noqday machadka ah tacliinta sare oo bixiya soo diyaariyeen ballaaran fursado tacliimeed oo duurka ku ah maamulka. Sidoo kale, RAPA ayaa dhaqan ahaan ahaa hogaamiye qaran ee bixinta tababarka maaraynta dadweynaha shaqaalaha rayidka ah ee hadda iyo mustaqbalka gobolka iyo degmada.
On September 20, 2010 - Ku maalgeliyey State-Educational Hay'adda cusub Federaalka of Higher Education Professional Ruush Academy Madaxtooyada Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha (RANEPA) waxaa abuuray. By qadaridda Madaxweynaha Ruushka ee 20.09.2010 Academy Ruush ee Maamulka Guud iyo sidoo kale laba iyo toban akademi ee gobolka of hay'adaha ku biiro Academy of dhaqaalaha qaranka under Dowladda Ruushka si ay u sameeyaan Academy Madaxweynaha Ruushka Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha.
On September 23, 2010 - Vladimir Mau noqdo Raktarka ah RANEPA.
2010 - Ka dib markii midowgii Academy waxay noqotaa jaamacada ugu weyn ee dhaqaale iyo culuumta in Europe, jidaynayey si ay u helaan waxbarashada ka dib: waxbarashada dugsiga xirfadda, shahaadada Bachelor ee, Master degree ee, waxbarasho postgraduate, waxbarashada sare doctorate, barnaamijyada horumarinta xirfadeed iyo kuwii horeba xirfadeed.
2010 - The sayniska caalamiga ah – shirka wax ku ool ah “Russia iyo Adduunka” helo magaca “forum Gaidar”. E.T. Machadka Gaidar for Policy dhaqaalaha iyo Egor Gaidar Foundation shariikyada Academy ee haysta hore oo kale noqon “forum Gaidar”.
2010 - Academy wuxuu abuuraa Center Ruush ee Daraasaadka APEC in uu abaabulo cilmi-baarista iyo dejinayaan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan arrimaha la tacaalida Russia ee ka qayb APEC oo ay wakiil at forum APEC ee 2012.
2010 - Markii ugu horeysay ee ardayda ka soo Russia, dalalka deriska ah iyo meelo ka baxsan Academy furo barnaamijka shahaadada International Ingiriiska ku hadla ee Master.
2011 - Academy The noqonayaa a co-qabanqaabiyaha for xariirta Russia ee Strategy ee Horumarinta Bulshada iyo Dhaqaalaha si 2020.
2012 - Campus ugu horeysay Summer waxbarashada ee Academy Madaxtooyada: «Territory fursado» meel Kazan.
2012 - The Academy iyo bangiga aduunka noqon hawlgalayaasha istiraatiiji ah.
2012 - Academy waxay u adeegtaa sida a co-qabanqaabiyaha shirka ah fikir Haanta-20, koox ka mid ah xarumaha cilmi-baarista caalamiga ah, qayb ka mid ah Russia ee madaxtooyada G20.
2013 - RANEPA waxaa ka mid ahaa in Ururka Jaamacadaha hoggaamineed Ruush.
2013 - 100 qalin of RANEPA geli XIV rating ee «TOP-1000 maamulayaasha Ruush» sida ay Ururada Maareeyayaasha Ruush (2013)
2013 - Academy waxay noqonaysaa xubin ka mid ah ururka Network of Schools of Policy Dadweynaha, Arrimaha iyo Maamulka (NASPAA) sida hay'adda ugu horeysay ee Russian waxbarashada sare.
2014 - The sayniska caalamiga ah – Shirka wax ku ool ah oo duurka ku ah dhaqaalaha “forum Gaidar” of RANEPA la aqoonsan yahay sida dhacdo ganacsiga of a 2013 on madax banaan ugu horeysay «The Moscow Times Awards».
2014 - Academy wuxuu ku bilaabmaa kuwii horeba ee 9000 shaqaalaha rayidka ah ka Crimea iyo Sevastopol ay amar ku Ruushka Ra'iisul Wasaaraha Dmitry Medvedev.
2014 - Markii ugu horeysay ee Russia Academy ee uu yeesho iyo fulisaa nidaamka derajada gudaha ee MBA / EMBA iyo barnaamijyada dugsiyada ganacsiga.
2014 - Liberal Arts College oo ku salaysan mabaadii'da waxbarashada maadooyinka la furay in Academy ah.
2014 - Master of Policy Public Global (MGPP) barnaamijka oo midaysan ee heerarka caalamiga ah oo ka mid ah barnaamijyada ugu fiican shisheeye berrinkii siyaasadda guud waxaa furay Academy ah. Waa barnaamij ka mid-ah-a-nooc ee Russia.
2015 - An QS Stars sare hubinta tayada waxbarashada caalamiga ah ee la siiyay Academy la saddex «xiddigaha». Maanta waxaa la arkaa in ay qiimayn ugu sarreeya, waayo, wax kasta oo Ruush Waxbarashada Hay'adda Sare.
2015 - Sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada iyo Science of Ruushka, RANEPA waa on meesha 1aad ka mid ah Hay'adaha Waxbarashada Sare Moscow sida ay mushaaraadka graduate.
2015 - Academy Madaxweynaha ayaa heshay shahaadada ee category ah “Diyaarinta Tayada Sare ee Shaqaalaha Maamulka”, ka dib markii natiijada Hay'adaha Waxbarashada Sare Ruush afaraad rating sida ay wakaaladda rating RA Xeeldheer.
2015 - Qaar ka mid ah barnaamijyada RANEPA MBA waxaa si guul leh aqoonsan by Guddiga Qaranka ee Aqoonsiga Waxbarashada Business.
2015 - Heshiis iskaashi ka dhexeeya RANEPA iyo Wasaaradda Dhaqanka ee Federation Ruush la saxiixay.
2015 - Kooxda college ee RANEPA guuleystay Challenge qaranka Management Global (GMC) horyaalka.
2015 - Heshiiska on dhexgalka iyo iskaashiga la Adeegga Socdaalka Federaalka of Russia (FMS) waxaa saxiixay.
2015 - Laba heshiis la Gazprombank on iskaashiga iyo aasaaska ah deeq waxbarasho ee ardayda RANEPA waxaa saxiixay.
2015 - Heshiiska ayaa la Council Federation. Dhinacyada ayaa isku raacay oo ku saabsan isdhexgalka ku saabsan sharciga iyo horumarinta dhaqanka sharciga-fulinta. Mutual ururka, cilmi, tacliimeed, la talinta, taageero khabiir la siin doonaa.
1977-2010, ku Academy of Dhaqaalaha Qaranka
1977 - On salka Institute of Maamulka Dhaqaalaha National jira tan 1971 a hay'ad waxbarasho cusub - ee Academy of Dhaqaalaha National Council hoos USSR ee Wasiirada bilaabo hawsheeda. Academy The noqdo beegsaday at horumar ah ee diyaarinta shaqaalaha maamulka shuqulka wasaaradaha, waaxyaha iyo hay'adaha kale ee maamulka ee dhaqaalaha qaranka.
1988 - Awood ugu horeeyay ee ganacsi “dugsiga sare ee ganacsiga caalamiga ah” loo abuuray Academy ah, waxa uu ahaa dugsiga ugu horeysay ee ganacsi ee USSR ah.
1989 - Academy waxaa madax u Abel Gezevich Aganbegyan - oo xubin ka ah Academy Ruush ee Sciences ee USSR ah, mid ka mid ah hoggaamiyayaasha dhaqdhaqaaqa reformatory cilmiga dhaqaalaha guriga.
1990 - Sida qayb ka mid ah Academy ee Institute of Economic Policy kaas oo madax u Egor Gaidar waxaa lagu qabanqaabiyaa.
1992 - Ku Academy of Dhaqaalaha National Council hoos USSR ee Wasiirada helo magac cusub. Haddaba waxaa la odhan jiray Academy of Dhaqaalaha National hoos Dowladda Ruushka. Academy waxay noqonaysaa ma aha oo kaliya umbaa ah shaqaalaha rayidka ah iyo madaxda, laakiin sidoo kale xarumaha waxbarashada ee waxbarashada ganacsi bixiya dhammaan noocyada kala duwan ee adeegyada waxbarashada gudbikaraa oo ka mid ah dhaqaalaha, ganacsiga iyo sharciga.
1992 - The Academy of Dhaqaalaha Qaranka oo hoggaanka u qabatay horumarinta heerarka MBA Ruush.
1995 - The Academy of Dhaqaalaha Qaranka la siiyo xaaladda cusub ee tababarka ugu horeeysa, xarunta Nidaamsanaan iyo sayniska ee nidaamka of kuwii horeba iyo horumarinta xirfadeed ee shaqaalaha rayidka ah ee maamulka dawladda dhexe iyo gobolka. Professors ka USA, Boqortooyada Ingiriiska, Germany, France, Holland iyo dalalka kale bilaabin wax ku barayay Academy ah. Ardayda ka helo shahaadada gobolka Ruush gooni u leeyihiin fursad ay ku helaan shahaadada ee jaamacad ajnabi ah.
1996 - Barnaamijyada waxbarashada xirfad sare, waxaa la furay in Academy ah.
1997 - Bilowga ah ee hirgelinta barnaamijka State ee madaxda sare ee diyaarinta (barnaamijka Madaxtooyada). Ujeedada A istiraatiijiga ah ee barnaamijka Madaxweynaha waa in la keeno tayada maaraynta ganacsiga gudaha heerka caalamiga ah.
1999 - Bilowgii tijaabo gobolka on hordhac MBA ee Russia, bilaabay Academy ah. Hadda waxa laga bilaabo sida ay amarka ka mid ah Wasaaradda Waxbarashada ee Ruushka No. 1008 of 29.11.1999 Master barnaamijka Maamulka Business (MBA) bilaabo jiritaankeeda.
2001 - Bilowga ah ee barnaamijka DBA ugu horeysay ee Russia ee (Doctor Maamulka Business) - Barnaamijka waxbarashada dhaqaalaha postgraduate waarta ka 1 si ay u 5 sano loogu talagalay la helo aqoon dheeraad ah oo nidaamo dhaqaale codsatay. isreebreebka Tani deeq xaq u leeyihiin inay qabtaan jagooyinka sare ee maamulka.
2002 - Vladimir Aleksandrovich Mau - ka Doctor Dhaqaalaha, professor, dhaqaaleyahan Sharafta leh Federation Ruush noqdo Raktarka ee Ane.
2004 - Oo qayb ka ah hay'adda Academy for horumarinta caalamiga ah ee loo habeeyey. Ujeedada ugu weyn ee ay tahay in la ardayda iyo postgraduates ka USA iyo Europe socda barnaamijyada muddada gaaban shaqeeyaan. Academy ayaa ardayda ka Stanford marti, Harvard, Princeton iyo jaamacadaha kale ee American.
2005 - Academy wuxuu ku bilaabmayaa abuuraya System tababarka shaqaalaha iyo taageerada dawladaha hoose. Ujeeddada abuurista System tani waa si loo hubiyo in nidaamka tababarka joogtada ah iyo horumarinta xirfadeed hay'adaha dawladda hoose.
2007 - The Academy of Dhaqaalaha Qaranka noqonayaa goolkii guusha ee tartanka Hay'adaha waxbarashada sare State bandhigid barnaamijyo waxbarasho oo cusub.
1946-2010, ku Academy of Sciences Social - Academy Ruush ah ee Management – Academy Ruush ee Maamulka Guud
on August 2, 1946 ku Academy of Sciences Social hoos Guddiga Dhexe ee All-Midowga shuuciga xisbiga ee Bolsheviks la aasaasay. Waa hay'ad siyaasadeed ee ugu sareeya, tababarka shaqaalaha ee maamulka siyaasadeed dhexe iyo gobolka, iyo sidoo kale macalimiinta of hay'adaha waxbarashada sare iyo saynisyahano.
1971 - Golaha tacliinta aqbalo barnaamijka horumarinta Academy ah. Qaab dhismeedka Academy waxaa loo bedelay, profile ee nidaamo sayniska kordhiyay, waaxaha cusub loo abuuray. The bixinta cilmibaarisyadii cilmiga ee gobollada kala duwan ee dalka ka noqdo jihada cusub ee shaqada sayniska ee Academy.
1978 - Ku Academy of Sciences Social hoos Guddiga Dhexe ee xisbiga shuuciga ah ee Midowga Soofiyeeti ku salaysan saddex sare goobaha waxbarashada waxaa la abuuray: Dugsiyada tacliinta sare ee barashada cilmiga bulshada, dugsiga sare ee xisbiga iyo Dugsiga Sare Correspondence Party. tababarka An sare for madaxda sare ee takhasuso kala duwan bilaabmaa jiritaankeeda in Academy cusub.
1978 - Dhismaha campus tacliinta on Vernadsky Avenue ee Moscow waxaa ka bilowday.
1983-1985 - Dhismayaasha campus Academy ugu horeysay waxaa la gelin qalliin.
On November 5, 1991 - Amarka reer Ruush Madaxweyne Boris Yeltsin ah Academy of Sciences Social ekaysiiyaa Academy Ruush ah ee Management. Ujeedooyinka ugu weyn ee Academy noqon: diyaarinta postgraduate, kuwii horeba iyo horumarinta xirfadeed ee madaxda sare; horumarka tiknolojiyada cusub maamulka dadweynaha; fulinta baaritaan cilmiyeed barnaamijyada gobolka iyo mashaariicda; waxbarasho iyo hillaadiyo baahida madaxda sare '; bixinta taageero gorfaynta iyo macluumaadka hay'adaha gobolka ee xukuma.
1994 - Academy Ruush ah ee Management waxaa ka fadilnaa awoodda in la xakameeyo xarumaha shaqaalaha gobolka oo ka amar waaxda Head ay da'doodu ka yartahay Dowladda Ruushka oo mas'uul ka tahay tababarka adeega dadweynaha ahaa.
1994 - Ku saleysan Academy Ruush ah ee Management Academy Ruush ee Maamulka Guud hoos Madaxweynaha Ruushka (RAPA) waxaa abuuray. Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee hay'adda waxbarashada ee cusub: tababarka, diyaarinta, kuwii horeba iyo horumarinta xirfadeed ee shaqaalaha rayidka; horumarinta soo jeedinta ku saabsan siyaasadda shaqaalaha dawladda; qoritaanka talooyinka ku saabsan reformations adeegga dadweynaha iyo taageerada sharci.
1995 - Ansaxinta of Act ee Ruushka "About saldhig oo adeegga dadweynaha ee Ruushka", halkaas oo hawlaha RAPA waxaa diyaariyey. Waxaa lagu qeexay in shaqaalaha rayidka ah u leeyihiin in ay leeyihiin waxbarashada xirfadeed, iyo waxa ay leedahay in u dhigmaan aagga takhasus ah booska qabtay. Hawlwadeennada heli kuwii horeba u balan qaadayo iyo horumarinta xirfadeed. Hawlwadeennada noqon dhagaystayaasha bartilmaameedka ugu weyn ee RAPA.
On March 1, 2001 - Wasaaradda Waxbarashada siiso ruqsad si RAPA siinaya xaq in ay bixiyaan adeegyo waxbarasho ee 11 gaarka ah ee waxbarasho xirfadeed sare iyo 39 taqasusyo sayniska, iyo sidoo kale waxbarashada xirfad sare.
Ma rabtaa wada hadlaan Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Public on Map
Photos: Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha rasmiga ah Facebook
Ruush Academy of dib u eegista maamulka Dhaqaalaha iyo Qaranka
Ku biir si ay ugala hadlaan of Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha.
Rostov State University Medical dubay
Saratov University Technical State Saratov
Ruush State University for Humanities ah Moscow